Global Voices teny Malagasy » Iràka: “Tsy Misy Iraharahian’i Obama Antsika…” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Mey 2018 4:31 GMT 1	 · Mpanoratra Salam Adil Nandika (fr) i PREPA ECT2, miora
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Iràka, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
“Tsy Misy Iraharahian'i Obama Antsika”… Toy izany no fanehoankevitr'i Iraqi Pundit  [amin'ny teny anglisy toy ireo bilaogy rehetra tanisaina ato] .
“…” avy amin'i Baghdad Connect 
Ankoatra ireo efa “fahita mahazatra “, tsy dia misy firy ny fanehoankevitra hita eny anaty bilaogy irakiàna momba ny fifidianana izay ho filoha amerikàna. Saingy midika zavatra betsaka koa anefa io fahanginana io. Nisy namana vitsivitsy nanome fanazavàna ho an'ilay vehivavy biloagera Neurotic Wife :
Nanontany irakiàna vitsivitsy aho, ary ny ankamaroany dia toa tsy liana loatra amin'ny politika amerikàna : « Betsaka zavatra aterahana izahay miaraka amin'ny politika airakiàna ka tsy ndeha handany fotoana amin'izay an'i Etazonia», hoy ny filazan-dry zareo azy.
Ny fanendrena an'i Joe Biden  ho kandidà ho filoha lefitra dia nahatonga ireo bilaogera ho mahimahina manoloana ny kandidà demaokraty Barack Obama. Iraqi Pundit manome ny heviny  :
Tsy hanao afa-tsy ny hitondra ny firenena ho amin'ny tany mahamay ny nisafidianan'i Barack Obama izay ho filoha lefitra. Safidy manamarika tanteraka ny tsy firaharahiany ny vahoaka irakiàna. Nandritra ilay fifandonana, nasehon'i Bidena mazava tsara fa tsy misy afa-tsy toy ny olondia no fijeriny an'ireo Irakiàna, mendrika ny ho avela hifamono. Ny vahaoloana avy aminy dia ny fanapasahana ilay firenena mba hisorohana ny tsy hifamonoan'ireo biby. Azony arangaranga araka izay itiavany azy ny zavanisy hoe tsy tena maranitra toa an'i Biden i Bush sy John McCain, izy ireo, fara-faharatsiny, tsy hamela irery ny vahoaka irakiàna.
Nibras Kazimi manampy hoe  :
Ny tanjaka « ara-tsaina » ananan'i Biden ve tsy tokony hoe entina hanamarinana ny maha-ao anaty lisitr'i Obama azy mba hamenoana ny tsy fahampian'ny traikefany? Tsy dia lanin'ny vavonin'ny kilasy politika ao Iràka anefa io. Tsy dia mampahazo aina azy ireo ny nanendrena an'i Biden, izay ny anarany dia mifamatotra mandrakariva, eo imason'ny Irakiàna, aminà drafitra iray ho fanasamahana tampoka an'i Iràka .
Kanefa, toa misy fitiavana faobe an'i Obama ihany eny anivon-dry zareo Irakiàna. Tara aminy i Fayrouz , noho ny antony mampihetsi-po azy manokana :
Tsy ny fanantenana irery ihany no manosika anay ho any aminy, toy ny lazain'ilay mpifanandrina aminy. Fa ny fomba fanarenany anay mba hahafahanay miatrika ny zavamisy. Ny fahafahany mampino anay ny hisian'ilay “Amerika tsara” izay efa notiavinay hatrizay. Ny herin'ny “Isika” ho solon'ny “Izaho” no manainga ny olona hitodika any aminy.
Mandritra izany fotoana izany, Iraqi Atheist mampitaha an'i Obama  amin'ilay fandaharana ankafiziny ao amin'ny fahitalavitra. Hoy izy manoratra :« Ny andiany faha 4 amin'ny LOST mbola lafatra kokoa. Ary mbola tsara lavitra noho izany aza i Barack Obama », ary Neurotic Wife mangataka amin'ireo Irakiàna izay tafiditra ao anatin'ny faritra maitso mba hanome ny hevitr'izy ireo. Manoratra izy:
Ireo olona vitsy milaza fa liana nanambara fa aleony i Obama. Nampihomehy, satria ny iray tamin'ireny olona ireny nilaza tamim-pientanentanana hoe (mitanisa aho): « Tsy mila an'i Macyeen, ekena i Bahama ». Bahama ? Nanontany tena aho raha toa ka kandidà iray vaovao io fa izaho no tsy nandre… Nila segondra vitsivitsy aho vao tonga saina fa hay i Obama no tiany nolazaina, tpt.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/26/120035/
 Iraqi Pundit: http://iraqpundit.blogspot.com/2008/08/obamas-questionable-vp-pick.html
 “…” avy amin'i Baghdad Connect: http://baghdad-connect.blogspot.com/2008/08/blog-post.html
 fahita mahazatra: http://talismangate.blogspot.com/2008/08/biden-distrusted-and-dismissed-by.html
 Neurotic Wife : http://neurotic-iraqi-wife.blogspot.com/2008/08/obama-bahama.html
 Joe Biden: http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden
 aminà drafitra iray ho fanasamahana tampoka an'i Iràka: https://www.globalvoicesonline.org/2007/10/10/iraq-biden-backfires/
 Fayrouz : http://fayrouz.blogspot.com/2008/03/beaumont-for-obama.html
 mampitaha an'i Obama: http://iraqiatheist.blogspot.com/2008/07/sadis.html
 faritra maitso : http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_verte